बृद्ध युवा तरुण नेताका कारण काँग्रेसकै बदनाम, पदको दुरुपयोग | Citizen Post News
काडमाडौं । नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलमा टिका ग्रहण गरेर सभापति र महासचिवको पद पाएका दुई बृद्ध युवा नेताका कारण पार्टीको पुरै बदनाम भएको छ । तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले एक अर्कालाई विभिन्न आरोप लगाई कारबाही गरेको भन्दै प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । त्यसो गरिरहँदा दोस्रो जागरण अभियानमा होमिएको माउ पार्टी काँग्रेसको भने पुरै बदनाम भएको छ ।
हुन त त्यसो हुनुमा माउ पार्टी काँग्रेसको पनि दोष कम छैन् । पोखरा महाधिवेशनका नाममा पार्टीले भागवण्डा गर्दै टिका लगाएर चार सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको तीन बर्ष बितिसक्यो । आगामी मंसिर महिनामा सभापति, महासविचलगायतको कार्यकाल सकिदैं छ । महासचिव शाहीले बारम्बार समितिलाई बिस्तार गरेर बलियो तरुण बनाउन माग राख्दै आएका थिए ।
तर पार्टीले बेवास्ता गरेपछि उनले माउ पार्टीले थालेको दोस्रो जागरण अभियानको पूर्वसन्धामा विज्ञप्ति निकालेर तरुण र नेपाल विद्यार्थी संघलाई क्रमशः सिमित र सून्यमा राखेर गरिने अभियान लोकतान्त्रिका पार्टीको मुल्य र मान्यता विपरित भएको भन्दै त्यसो गरिए नौंटकी मात्र हुने बताएका थिए । उनले पार्टीको उक्त कदमलाई लाजमर्दो कदमका रुपमा प्रतिक्रिया दिएका पनि थिए । अर्कोतिर, तरुण दलका अध्यक्ष बस्नेतले एकलौटी निर्णय गर्दै विधान र विधि विपरित निर्णय लाद्न थाले ।
त्यसैक्रममा आक्रोसमा आएका महासचिव शाहीले सिन्धुपाल्चोक तरुण दलका सगुन श्रेष्ठलगायतको कारबाही फुकुवा गरेको पत्र दिए भने सप्तरी तरुण दलको अध्यक्ष सिताप्रसाद यादवलाई बनाइदिए । त्यसपछि आक्रोशमा आएका अध्यक्ष बस्नेतले तत्काल विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिवको निर्णय खारेज गरिएको जानकारी दिए । फेरि महासचिव शाहीले विज्ञप्ति निकालेरै अध्यक्ष बस्नेतको निर्णयलाई नै खारेज गर्दै आफूले गरेको निर्णय यताबत रहेको जानकारी गराए ।
त्यसपछि पनि अध्यक्ष बस्नेत चुप लागेर बसेनन्, अन्ततः महासचिव शाहीलाई पदबाट हटाइएको घोषणा गर्दै उनले विज्ञप्ति जारी गरे । त्यसको एक घण्टा वित्न नपाउँदै महासविच शाहीले अध्यक्ष बस्नेतलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्ष पदबाट हटाइएको विज्ञप्ति निकाले । संभवतः नेपाल तरुण दलको मात्र नभई नेपाली काँग्रेस पार्टीकै इतिहास यसरी लफडा गरिएको पहिलो पटक हुनसक्छ । यद्यपि पार्टी चुपचाप प्रक्रिकिया नदिई सुने नसुनेझै गरी बसिरहेको छ ।
यस्तो छ अध्यक्ष बस्नेतको आरोपः
यस्तो छ महासचिव शाहीको आरोपः
उता दुवै बृद्ध नेताका धुपौरो, टपरे र पुच्छरहरुले अध्यक्ष र महासचिवको कदमलाई ठिक भन्दै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । तर, दुवैले गरेको प्रक्रिया गलत भएको भन्दै त्यसो नगर्न वा मिलाउन कसैले अहिलेसम्म प्रयास गरेको देखिन्न । जसका कारण नेपाली काँग्रेसप्रति वितृस्णा फैलिन सक्छ । ख्यै त्यसको ख्याल गरिएको ?
दुवैले पद र शक्तको दुरुपयोग गर्दै नेपाल तरुण दलको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरुले एक अर्कालाई गलत देखाउँदै साधारण सदस्य समेत नहरने गरी उल्लेखित पदबाट हटाइएको विज्ञप्ति निकालेर जग हसाईरहेका छन् । के अब माउ पार्टीले दुवै बृद्ध युवा नेतालाई हटाएर ताजा महाधिवेशनमार्फत साच्चिकै युवा तरुणको नेतृत्व दिलाउन सक्ला ? फोटोः मिडिया फाइल